प्राइम कमर्शियल बैङ्क लि . | गृहपृष्ठ
Home लगानी प्राइम कमर्शियल बैङ्क लि .
प्राइम कमर्शियल बैङ्क लि .
मुख्य कार्यालय : न्यूरोड, काठमाडौं
स्थापना : २०६४ असोज ७
अध्यक्ष : नरेन्द्र वज्राचार्य
सीईओ : नारायणदास मानन्धर
शाखा कार्यालय : २४
बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको संलग्नतामा २०६४ साल असोज ७ मा यो बैङ्क स्थापना भएको हो । स्थापनासँगै विभिन्न आधुनिक बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिरहेको यो बैङ्कले २०६६ जेठ १० मा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि ३० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रावधानअनुसार चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न यो बैङ्कले गतवर्षको वार्षिक साधारणसभाको निर्णयमोजिम १ बराबर १ (१:१) को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको थियो । हाल यो बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू.२ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । चुक्ता पूँजी वृद्धि भएअनुसार यो बैङ्कको खुद मुनाफामा भने वृद्धि हुन सकेको छैन । फलस्वरूप, बैङ्कको मूल्य-आम्दानी अनुपात र प्रतिशेयर आयमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
यो कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयर मूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा हाल यसको शेयर न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । गत जुलाई महीनाको अन्तिमदेखि अक्टोबरको शुरुआतसम्म स्केल ३० लाई छोएको यो कम्पनीको शेयरमूल्यका आधारमा बनेको आरएसआई रेखा विस्तारै बढ्नेक्रममा देखिएको छ । साउन २५ गतेको कारोबारका आधारमा यस कम्पनीको आरएसआई रेखा केही माथि बढेर स्केल ४० तिर उन्मुख देखिएको छ । हाल बजारमा विक्रीचाप बढ्दै गएकाले यो कम्पनीको शेयरमूल्यमा पनि पुन: उतारचढावको अवस्था आउने सम्भावना बढेको छ । आरएसआई रेखाको सङ्केतअनुसार यो कम्पनीको शेयरमूल्य थप बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले यस बैङ्कको शेयर विक्री गर्नेहरूका लागि केही समय पर्खनु उपयुक्त हुन्छ भने खरीदकर्ताहरूका लागि उपयुक्त समय आएको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको मन्दी र नेपालको राजनीतिक अवस्थामा बढ्दै गएको अन्योलताले बजार कुन अवस्थातिर जाने भन्ने अनिश्चत बन्दै गएको छ ।
आव ०६७/६८ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष०६७/६८ को अपरिष्कृत तेस्रो वित्तीय विवरणअनुसार सो अवधिमा बैङ्कले रू. २६ करोड १२ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको भन्दा ७ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी र मुनाफाको वृद्धिदर समान छैन । यसले गर्दा बैङ्कको वित्तीय परिसूचकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैगरी बैङ्कको जगेडा कोष अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा ३८ दशमलव १० प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल रू.४२ करोड ६० लाख पुगेको छ । साथै, बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन पनि समीक्षा अवधिमा १७ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १७ अर्ब ८६ करोड पुगेको देखिन्छ । लगानीतर्फ४ दशमलव ८१ प्रतिशत वृद्धि भएर हाल रू. १ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । साथै ऋण प्रवाहतर्फ पनि ३० दशमलव ४१ प्रतिशतको वृद्धि भएर हाल रू. १७ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । लगानीका क्षेत्रमा देखिएको कमी र ऋण प्रवाह वा कर्जा सापटीतर्फदेखिएको वृद्धिले बैङ्कको सामान्य जोखिम वढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
वार्षिकशेयर कारोबार :
• यस बैङ्कको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा नियमित रूपमा कारोबार हुने गरेकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्नका लागि केही समस्या पर्दैन । यसले गर्दा आफूलाई चाहिएको समयमा उक्त कम्पनीको शेयर सजिलैसँग किनबेच गर्न कुनै समस्या पर्दैन । शेयर मूल्यमा उतारचढावको अवस्था आइरहने भएकाले गर्दा सट्टेवाजहरूले पनि यस बैङ्कको शेयरमा लगानी गरी सामान्य मुनाफा कमाउन सक्ने सम्भावनासमेत छ ।
• बजारमा घटबढको अवस्था आउँदा यो बैङ्कको शेयरमूल्यमा अत्यधिक प्रभाव पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी वित्तीय अवस्था तथा वित्तीय परिसूचकहरू पनि सुधारात्मक अवस्थातिर उन्मुख देखिएकाले लगानीकर्ताहरूका लागि त्यति नराम्रो छैन ।
• बैङ्कले आफ्नो चुक्ता पूँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अनुपातमा पुर्याइसकेको छ । लगातार २ वर्षहकप्रद शेयर निष्कासन गरी उक्त अनुपात पुर्याएको हो । साथै पछिल्ला २ वर्षमा क्रमश १०-१० प्रतिशतका दरले बोनस शेयरसमेत वितरण गरेको थियो ।
• कम्पनीको दोस्रो वार्षिकसाधारणसभाले बोनस शेयरमात्र वितरण गरे पनि तेसो साधारणसभामार्फत लगानीकर्ताहरूले १० प्रतिशत नगद लाभांश पनि प्राप्त गरेका थिए । आगामी दिनमा हुने चौथो वार्षिकसाधारणसभामा आव ०६७/६८ को मुनाफाबाट लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम रू. १० प्रतिशत नगद लाभांश पाउने लगभग निश्चित नै देखिन्छ ।